Africalọ nkwari akụ Africa kachasị ọhụrụ na Somaliland iji mepe mmụọ mmụọ ịrị elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Africalọ nkwari akụ Africa kachasị ọhụrụ na Somaliland iji mepe mmụọ mmụọ ịrị elu
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Somalia • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Otu ụlọ ọrụ na-anabata ndị ọbịa n’India egosila atụmatụ ya imeghe ụlọ oriri na nkwari akụ na Hargeisa, isi obodo Somaliland.
Somaliland bụ akụnụba na-eto eto na East Africa. Dị ka ebe njedebe, ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye maka ndị njem na ezumike. Port Somaliland nke Berbera bu ezigbo adighi anya na họtelu. Enwere atụmatụ maka ọdụ ụgbọ mmiri ka ebuli elu, obodo azụmahịa nke mba ahụ.
Ndi nwe ulo nke Oke ugwu, Sarovar Premiere Hargeisa, mgbe emechara ya na 2020 gha enwe onu ahia na ime ulo iri na abuo; nnọkọ na nzukọ, ebe a na-eri nri ụbọchị niile na ebe igwu mmiri.
Ajay K Bakaya, Onye isi nchịkwa, Sarovar Hotels Pvt. Ltd. kwuru, “Iji bulie ohere ị ga-enwe n’ihu n’Africa, anyị nwere obi a toụrị ịkpọsa usoro iheomume ọzọ na atụmatụ mgbasa Sarovar. Hotellọ nkwari akụ a dị n'otu n'ime ebe ndị mara mma nke Somaliland dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri nke Berbera ma nwee njikọ dị mma site na ọdụ ụgbọ elu Hargeisa Egal yana ndị njem na mba ahụ. Ebe ọ bụ na anyị nwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma na mba ndị ọzọ dị n'Africa, ugbu a, anyị na-atụ anya ile ọbịa nke ọma na mba a na-eto eto. ”
Maka akụkọ ihe mere eme, enwere ihe osise na okwute okike, nke kachasịkarị bụ ọgba Laas Geel. Maka ndị hụrụ osimiri n'anya, Berbera bụ ụsọ oké osimiri gbara osimiri gbara agba, ebe mmiri na-ekpo ọkụ nke Oké Osimiri Aden guzo. The trekker na ọdịdị njem ga-enwe ohere ịgbanwe topographies si ugwu gaa waterfalls, na plateaus.
Maka ozi ndị ọzọ na Sarovar Hotels & Resorts, pịa ebe a.